Golaha amniga ee UN - BBC News Somali
Posted at 3:42 24 Abriil 20213:42 24 Abriil 2021
Xubnaha Golaha Ammaanku ayaa muujiyay si aad ah uga walaacsan sii socoshada jahwareerka siyaasadeed iyo khilaafka u dhexeeya hoggaamiyeyaasha siyaasada Soomaaliya ee ku aaddan qaabka doorashada loo qabanayo .
Posted at 6:38 27 Febraayo 20216:38 27 Febraayo 2021
Posted at 8:32 24 Nofembar 20208:32 24 Nofembar 2020
Saddex toddobaad ka hor ayay aheyd markii dowladda Itoobiya ay howlgal militeri ku qaaday gobolka TigrayImage caption: Saddex toddobaad ka hor ayay aheyd markii dowladda Itoobiya ay howlgal militeri ku qaaday gobolka Tigray
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa maanta gelinka danbe ka shirayaa colaadda ka taagan gobolka Tigray.
Kulankan Golaha Ammaanka ayaa imaanaya xilli dowladda Itoobiya ay sheegtay inay isku diyaarineyso sidii taangiyada dagaalka loogu weerari lahaa caasimadda Mekelle.
RA'isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed xoogagga TPLF wuxuu ugu baaqay seddex maalmod oo Arbacada ku eg iney si nabad ah dowladda isugu soo dhiibaan, isaga oo sheegay iney ciidamadiisu magaalada Mekelle ay hareereeyeen ayna dhici karto wajiga seddexaad ee ugu dambeeyey dagaalka inuu billowdo.
Abiy Axmed wuxuu hoggaanka Tigraay uu u sheegay in la marayo "meel aan laga noqon karin".
Posted at 8:59 27 Oktoobar 20208:59 27 Oktoobar 2020
Posted at 21:51 18 Juunyo 202021:51 18 Juunyo 2020
Ducaale: Uma adeegsan doonno kursiga Golaha Ammaanka khilaafka Soomaaliya
Kenya iyo Soomaaliya ayaa isku haya xuduud badeedka u dhexeeya.
Posted at 15:55 17 Juunyo 202015:55 17 Juunyo 2020
Dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay oo tiradoodu dhantahay 193 dal ayaa maanta cod u qaadi doona Kenya iyo Djibouti kii ku fadhiisan lahaa kuraasta aan joogtada ahayn ee qaaradda Afrika looga qoondeeyey midkood oo ay tartan ugu jireen beryahan ba labada dal.
Posted at 14:40 28 Sebtembar 201914:40 28 Sebtembar 2019
Madaxweynaha Jabuuti oo Qaramada Midoobay geeyay hardanka kursiga ee kala dhexeeya Kenya
Jabuuti ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ku hanan lahayd kursiga Afrika ee golaha amniga ee Qaramada Midoobay
Posted at 10:27 29 Agoosto 201910:27 29 Agoosto 2019
Muxuu yahay qaraarka 1267 ee Kenya ay dooneysay in loo adeegsado Al-Shabaab?
Golaha Amniga ayaa la sheegay in uu diiday qaraarka oo loo arkay in "caqabad uu ku noqon karo hay'adaha".
Posted at 13:18 24 Agoosto 201913:18 24 Agoosto 2019
Muxuu maamulka Koonfur galbeed ka sheegay Safiirka Peru ee Qaramada Midoobay?
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dhawaan kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya